Ny fitsapana ara-pitsaboana ny kinovan'ny vaksinin'ny COVID-19 dia manomboka any Israel
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fahasalamana » Ny fitsapana ara-pitsaboana ny kinovan'ny vaksinin'ny COVID-19 dia manomboka any Israel
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Israel Vaovao Vaovao • Vaovao • tompon'andraikitra • Safety • teknolojia • Tourism • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny vaksinin'ny COVID-19 rehetra misy ankehitriny dia entina amin'ny tsindrona iray na roa.
Fitsapana ara-pitsaboana ireo mpilatsaka an-tsitrapo miisa 24 tsy vita vaksiny ho an'ny kinovan'ny vaksinina tokana nahazoana doka tokana.
Ny kapsily dia azo ampiasaina ho fampiroboroboana ny karazana Delta izay mifindra kokoa.
Ny pilina dia nanandramana kisoa ary ny biby dia namokatra antibodies taorian'ny fitantanana azy.
Jerosalema-monina Fanafody oramed nanambara fa nahazo fankatoavana avy amin'ny Ivon-toeram-pitsaboana Tel Aviv Sourasky hanombohana fitsapana ara-pitsaboana ireo mpilatsaka an-tsitrapo miisa 24 tsy vita vaksiny ho an'ny kinovan'ny vaksinin'ny COVID-19 iray kapsily tokana.
Nanambara i Oramed tamin'ny volana martsa fa nanandrana ny pilina tamin'ny kisoa izy ary ireo biby dia namokatra antibody taorian'ny nitantanana azy.
Ny kinovan'ny vaksinin'ny coronavirus dia mety ho "mpanova lalao" any amin'ireo firenena ambany tahan'ny vaksiny, hoy ny mpamorona.
Ny orinasa manampahaizana manokana amin'ny famoronana fanafody am-bava izay matetika ampitaina amin'ny tsindrona, dia eo am-panandramana ihany koa amin'izao fotoana izao ho an'ny kapsily insuline am-bava hitsaboana diabeta Type-2. Ny vaksinin'ny COVID-19 rehetra misy ankehitriny dia entina amin'ny tsindrona iray na roa.
Araka ny nambaran'ny tale jeneralin'ny Oramed Nadav Kidron, ny fitsarana ny pilina vaksinin'ny COVID-19 dia antenaina hanomboka amin'ny volana ambony, raha vao nahazo ny fankatoavana farany avy amin'ny Minisiteran'ny Fahasalamana.
Nanampy i Kidron fa ny pil dia azo ampiasaina ho fampiroboroboana ny karazana Delta mifindra kokoa.
"Ny vaksininay am-bava, izay tsy miankina amin'ny rojom-panala be loatra tsy toy ny vaksinin'ny coronavirus hafa, dia mety hidika fa ny fahasamihafana misy eo amin'ny firenena iray afaka mivoaka avy amin'ny areti-mandringana na tsia," hoy i Kidron.